Yenza i-thumbnails kunye neeplagi ezinokuThunyelwa kweplagi- iGeofumadas
thumbnails Post Related kudala thumbnails kunye plugins
NgoSeptemba, 2011 Internet kunye neBlogs
Ngexesha elidlulileyo ndilahla Arthemia, itemplate enobuhle obuhle kakhulu beWordPress kodwa ngokungahambi kakuhle kokuphakamisa izithombisi kunye nomsebenzi wexesha lesiphelo eziletha iingxaki ezinkulu ekusebenziseni ububanzi boovimba. Emva kwamatikiti aliqela aphakanyiswe ngabaphathi be-HostGator, ndithathe isigqibo sokugcina itemplate ngelixa ndiphucula obu buthathaka.
Ukuhlaziywa kwe-WordPress yakutshanje kweza isiza esizenzekelayo se-thumbnails, ezazigcinwe ngaphambili kubukhulu bazo ezahlukeneyo. Oku kuyakwandisa ububanzi bokubamba kodwa akukho nto ibalulekileyo kuqwalaselwa ukuba azizizo iifayile ezinkulu kunye nokusetyenziswa ukuba imixholo emitsha inika ukusebenza. Ke, ngalo lonke ixesha inqaku lenziwa, i-WordPress ivelisa i-thumbnail ngobubanzi be-32, i-160 kunye ne-170 pixels.
Ndizakusebenzisa iiplagi ezimbini okungenani ezisebenzisa ngokupheleleyo lo msebenzi kunye nengxaki encinci ekusebenziseni izixhobo; Zombini ukwakhiwa nguMaria Shaldybina kwaye ndithetha ukuba plugins Yenza izithuba zemifanekiso y Izithuba zemifanekiso enxulumene noko.
Yenza izithupha kwizithuba zangaphambili.
Umda wotshintsho olwenziwe kwi-WordPress zizinto ezingena kuzo zonke izithuba zangaphambili. Ukulenza iplagi yezixhobo zemigca yolwazi yenza umsebenzi omkhulu, isebenza kakhulu zonke izithombisi zeenqaku ngalinye kwibhlog, iquka ilogi apho iingxaki ezifunyenweyo zibonakaliswa, zihlala ziyimifanekiso egcinwe kwenye indawo okanye ulawulo ngaphakathi kwesizinda esinye . Ayifanelekanga ukwenza le nkqubo kwiiyure xa ukugcwala kuninzi, kuba kuthatha imizuzu embalwa kwaye sinokufumana itikiti le-HostGator.
Oku kunceda ukuze izithombisi zentloko yeSwift ingabonakali gwenxa, kuba xa ingekafumani, iphakamisa imifanekiso ye-32 x 32 ngenkangeleko embi kakhulu.
Le enye iplagi, izithuba ezinxulumene nezikhombisi iindawo ezinxulumene nekhonkco ngezigaba okanye iithegi ekupheleni kwamanqaku, ziphakamisa umfanekiso we-thumbnail. Kuyacaca ukuba, ukuze isebenze, inkqubo yangaphambili kufuneka yenziwe, ukuba ayizukubonisa umfanekiso osilelo kumanqaku angenaso isicangca.
Ingxaki eqhelekileyo kule plugin idla ngokuba ngoonobumba abakhethekileyo, ezinje ngoonobumba ngesivakalisi okanye i-ñ (á yi í ó ú ñ). Oku kwenzeka kuba nangona isiseko sedatha sinokumiliselwa kwi-UTF-8 njengoko kunjalo kum, imibuzo evelisiweyo ayinakulungiswa.
Kule nto, iplagin kufuneka ihlelwe. Kwenziwe kumhleli wethebhu yasekhohlo, iiplag, emva koko kukhethwe ifayile ezinxulumene-nezithuba zemikhombandlela.php kwaye umxholo ukhutshelwe ukuhlela ngaphandle.
Iyaphandwa kufutshane nomqolo we-362, kwaye "htmlspecialchars (" kunye ne-Paregraph yokuvalwa ")" isusiwe. Ukwenza oku ungahlela ngqo kwiCpanel, okanye usebenzise i-DreamWeaver okanye iCofiCup, kuba ziinkqubo ezisivumela ukuba sibone amanani omqolo.
Oku kuya kusombulula ingxaki yee-accents.
Post edlulileyo«Edlulileyo Kufakwa gvSIG Mobile
Post Next Yintoni entsha kwi-Global Mapper 13Okulandelayo "